Microsoft ayaa ku dhawaaqday in diyaarad dheeraad ah oo duulimaad ah ay imaaneyso Microsoft Flight Simulator sanadka 2022, ...
Kooxda Microsoft Flight Simulator waxay ku dhawaaqeysaa sii deynta World Update IV - France / Benelux. Tan waxaa ka mid weyn ...
Waqtiyo mashquul ah laakiin waqtiyo xiiso leh laga soo qaatay xerada X-Plane - waxaan hadda ku jirnaa heerarkii ugu dambeeyay ee geeddi-socodka horumarinta ee ...
HST Jilmooyinka ayaa soo saaray bayaan ku saabsan ku daridooda deegaan "xAmbience" ee loogu talagalay X-Plane 11 (taariikhda la sii daayo ee ...
IndiaFoxtEcho waxay ku dhawaaqday cusbooneysiin ku saabsan MB-339 ee loogu talagalay MSFS 2020. Diyaargarowga World Update IV waxay ahayd inay ...
Mashruuca VSKYLABS Aeroprakt A22-LS ee loogu talagalay X-Plane oo ay soo saartay Laminar Research ayaa gaadhay diyaar garowgii ugu dambeeyay ee nooca v1.0 ...
Fiidiyow yar oo fiidiyoow ah oo kaliya si loo cunteeyo rabitaanka waxa soo socda markaan ku dhowaanno sii deynta 146 ...
Maaddaama aan si tartiib tartiib ah u dhammaystireyno cusbooneysiinta KA350-ka, oo aan dhowaan u soo deyn doonno macaamiisheenna, waxaan rabnay sidoo kale ...
Kulamada Aerosoft, waxaa la daabacay horudhac muuqaalka xiga ee muuqaalka MSFS 2020 ee ka socda Stairport. Waxay kala yihiin ...
MilViz ayaa ku dhawaaqday sii deynta diyaaradoodii ugu horreysay ee loogu talagalay jilitaanka duulimaadka Microsoft, FG-1D Corsair ...
Cusub oo ka socda Verticalsim oo loogu talagalay X-Plane 11 waa garoonka diyaaradaha ee KFAY Fayette ee Waqooyiga Carolina, USA. Isku dar ah ...
Cusbooneysiinta 2.7 ee loogu talagalay DCS World, horumariyeyaashu waxay soo bandhigi doonaan xasilinta booska Maverick-ka isha lagu hago. The ...
Baalasha Flanders Fields: Inta udhaxeysa Jannada & Jahannamo II la sii daayay
Baalalka Flanders Fields: Inta udhaxeysa Jannada & Jahannamada II ayaa diyaar u ah hadda in la iibsado. OBD wuxuu ku faanaa inuu kuu keeno ...
Diyaaradda Jannada waxay wadaagtay sawirro horudhac ah oo ka mid ah unugyada AS1000 iyo AS3x ee laga helay Mustang-ga soo socda ee ...
Mashruuca VSKYLABS Aeroprakt A22-LS ee loogu talagalay X-Plane oo ay soo saartay Laminar Research (dhowaan soo socda!). Daaqada sii deynta ayaa loo dejiyay ...
CFSS (CanadianFlightSimStudios) waxay ku dhawaaqeysaa sii deynta Delta Heritage Airpark ee Vancouver ee MSFS 2020. Tani ...
Horudhaca DCS Hababka Radar F / A-18C
DCS: F / A-18C Hornet qaabab cusub oo radar ah: Cusboonaysiinta weyn ee xigta ee Hornet, waxaan ku dari doonaa laba, qaabab radar cusub ah: Wide ...
HJG "Sannad Guuradii Ugu Weynayd & 21aad" Cusboonaysiinta bogga. HJG (Kooxda Jetliners taariikhi ah) waxay ku faraxsan tahay inay shaaciso ...
Miyaad ka quusatay qorshooyinka safarkaaga mustaqbalka dhow? Ku noqo dalxiis dalxiis leh kudar-kaas bilaashka ah ee loogu talagalay ...
Kooxda Duulimaadyada Taariikheed Waxay Ogtahay Afrika
Waxaa jira shirkado duulimaadyo badan oo dalwad leh oo daboolaya warshadaha duulista, laakiin waa yar yihiin haddii ay jiraan kuwa waligood wax ka qabtay Afrika wax badan ...
Natiijooyinka 1 - 20 ee 273